About Xidhmada Aluminum ah - DongGuan JinRong Aliminum Products Co., Ltd
Waayo, xirmo aluminium, waxaannu raaci doonaa shuruudaha macaamiisha ee iyaga santuuq iyo diyaarin doonnida in Ahaado.
Ogaanshaha in wax soo saarka aluminium waa culus weyn yar, waxaanu ka fiirsan Curiyeyaasha halista marka aan iyaga ka soo markab. Sidaas awgeed, waxaan ku siin qorshe xirmo weyn si aad u doorato sida soo socota:
Haddii alaabta tiro yar, waxaanu kuu soo jeedinaynaa inaad iyaga santuuq in ay isticmaalaan kartoonka. Waxan daboolaynaa afka kartoonka iyo xoog dhumucda kartoonka si looga fogaado dhaawac marka iyaga ka soo markab.
2.Plywood guddiga xirxiraan
Waa sida go'an in ay alaabahooda profiles aluminium marka aan u isticmaalno xirxirida guddiga plywood, taas oo ay ka fogaadaan waxyaabaha uu burburo ama ku dhicin dhulka.
Sanduuqa 3.Wood xirxiraan
Waa wax fiican in aad ku riday profiles aluminium goynta sanduuqa qoryaha.
Codsiga macaamiisha ee 4.By
aqbalayno codsiga macaamiisha ah ee in ay alaabahooda profiles aluminium si markab baxay. Haddii aad leedahay fikrado weyn ama ka fiirso arrimo ammaan, waxaa na farxad inaan dabagal codsigaaga in ay alaabahooda badeecada.